प्रचण्ड, बादल देखि विप्लवसम्मको मुद्धा निशुल्क हेरेको छु : अधिवत्ता एकराज भण्डारी (अन्तरवार्ता)
प्रचण्ड, बादल देखि विप्लवसम्मको मुद्धा निशुल्क हेरेको छु : अधिवत्ता एकराज भण्डारी (अन्तरवार्ता) - Nepal Talk
काठमाडौँ । पुर्व सांसद तथा बरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले प्रचण्डको मुद्दा हेगसम्म नपुग्ने बताएका छन्। प्रचण्ड , बादल देखि विप्लव सम्मको मुद्दा निशुल्क हेर्ने वरिष्ठ अधिवत्ता एकराज भण्डारीसँग नेपालटकका लागि आनन्द पुन र भुमिराज अधिकारीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :
तपाईसँग हामीले देखेका तिनवटा कुरा तपाई अहिले वर्तमान परिस्थीतिमा तपाई कानुन ब्यवसायी तपाईको विगतलाई हेर्ने हो भने तपाई नेता तर अर्को विषयवस्तुलाई हेर्ने हो भने आम जनता बिच तपाई राजनितिक विश्लेशक तपाई आफुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
म त म नै भन्न रुचाउछु तेस्तो केही छैन। मलाई अब दृष्टीकोण हो तपाईले भने जस्तै मलाई अब कसैले कामको चरित्र कामको मुल्याङ्कनको हिसाबले कामको क्षेत्रले लामो समय काम गरे त्यो पनि हो। तपाईले भने जस्तै विषय विगतमा एउटा राजनितिमा पहिले देखि आफुलाई अलीकती जान्ने भए क्याम्पस लेबल पढ्दा देखि नै मैले विद्यार्थी लेबलबाट राजनिति शुरु गरेर लामो समय राजनितिमा बसे। यद्यपी अहिले पनि राजनितिमा रहर लाग्छ। त्यस कारण विष्लेषक चाहि नभनौ। तर देखेका विषयवस्तुहरु आफुलाई लागेका विषयबस्तुहरु राख्ने चाहि हो।
तपाईको विगतमा जोड्न चाहे तपाई आफ्नो जन्म त्यस पछि विद्यार्थी राजनिति प्रवेश र तपाईले दश वर्षे जनयुद्धमा निभाएको भुमिकाबारे बताई दिनुहोस् न?
म नेपाली समाजको एउटा सामान्य मध्यम वर्गिय किसान परिवारमा जन्मीएको हुँ। गाउँमा मेरो बुबा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछि सामान्य ढङ्गले गाउँमै पढि सके पछि मैले त्यस बेला २०३४ सालमा एसएलसी पास गरेर म क्याम्पस पढ्न नेपालगञ्ज आउनु पर्यो। गाउँघर नजिकै क्याप्स थिएनन्। नेपालगञ्ज क्याम्पसमा ०३५ सालमा भर्ना भए। त्यस पछि नेपालको एउटा लामो समयदेखिको राजनिति जुन एउटा जमि रहेको अवस्था थियो त्यसमा चाहि ३५ सालमा जब बङ्गला देशमा भुटोलाई फाँसी दिईयो। त्यस पछि त्यो नेपालमा जब राजदूतबासमा विद्यार्थीहरुले त्यसको विरोध जनाएको यीस्थीती थियो। काठमाडौमा पनि त्यसको ठुलो प्रदर्शनहरु भए र नेपालगञ्जमा पनि भए। म पहिलो चोटि त्यसमा समावेश भएको थिए।
त्यो कुन दल विषेश पार्टी थियो कि स्वतन्त्र थियो त?
त्यो पञ्चायतका पक्षका विद्यार्थीहरुको नाम राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलल भन्ने हुन्थ्यो। त्यो विद्यार्थी मण्डलले हैरान खेलाउथो दुख दिन्थ्यो हामीहरुलाई म तेती खेर खासै म यो हुँ त्यो हुँ भन्ने थिएन। तर राजनिति चेतनाको हिसाबले मैले जति जानेको थिए म कम्युनिष्ट हुँ भन्ने महशुस हुन्थ्यो त्यति बेला। मैले अरु बुझेको थिईन सबै मानिसहरु समान हुनुपर्छ , परिश्रम गनुपर्छ भन्ने बुझेको थिए। त्यस कारण कम्युनिष्टप्रती झकाप थियो। धेरै बुझेको थिएन।
त्यस पछि आन्दोलनहरुमा लागे र विस्तारै जब जेठ १० गते राजाले विद्यार्थीमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरे। त्यस पछि विद्यार्थी संगठनहरु बाहिर आए त्यसमा म चाहि पहिलो चोटी २०३५ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन छैटौको सदस्य आधिकारीक रुपमा एक शुक्का त्यसबेला पच्चीस पैशाको टिकट काटेर म चाही सदस्यता प्राप्त गरेको थिए।
२०५२ साल फागुन १ गते देखि जनयुद्ध शुरु हुदै गर्दा खेरी तत्कालीन नेताहरु केहि समयकाल भन्दा अगाडी भुमिगत हुनुभाको थियो तपाईले २०५२ साल देखि २०६३ साल सम्मको संक्षिप्त बताई दिनुहोस् न ?
म बिचमा राजनिति त गर्दै थिए तर काठमाडौमा केही समय सरकारीमा जागिर खाए। थोरै समय त्यो बेला मेरो पढाई सकि सको थियो। म ल क्याम्पस बाट बिएल पास गरेर मैले लार्यसन्स लगि सकेको थिए। त्यति बेला कर्मचारी आन्दोलन भयो मलाई चाही अराष्ट्रीय तत्व भनेर कार्बाहीमा पनि परे। त्यस पछि म वकील पनि भए त्यस पछि म खुलेर राजनितिमा लागे। राजनीति मुद्दाहरु हेरे र राजनिति क्षेत्रका मुद्दाहरु कानुनी रुपबाट सहयोग गर्दै गए।
खास गरी काभ्रेका गाउँ गाउँ त्यस बेला गाविस थिए गाविसहरुमा जनमोर्चाका मान्छेहरुलाई दमन गरियो मुद्धा लगाईयो रोल्पा रुकुममा तेस्तै लगाईयो ठाउँठाउँमा नेताहरुको तर्फबाट मुद्दा बहस गर्न जान्थे। २०५१ सालमा लोकेन्द्र विश्टलाई रुकुममा मुद्दा लगाइयो त्यो बेला बहस गर्न रुकुम पुगेको थिए सुन्धुलीगडी हान्दा खेरी फगुन १ गते सिन्धुलीमा अअिलेका गृहमन्त्री समेतलाई मुद्दा लगाको थियो। म उहाँको तर्फबाट बहस गर्न सिन्धुली पुगेको थिए।
दश वर्षे जनयुद्धमा तपाईको भुमिका र पार्टीको संर्घष के थियो ?
म पार्टीमा काठमाडौमा काम गर्थे खासगरी बुद्धीजिवी क्षेत्रमा कम गर्थे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी कानुन र मानव अधिकार विभाग भनने हुन्थ्यो त्यो कानुन र मानव अधिकार अन्तर्गतको म एउटा सदस्य थिए। पार्टी कमीटि भित्र थिए। त्यस पछि त्यसलाई चाही कुनै बेला अहिलेका गृहमन्त्रीले हेर्नु हुन्थ्यो , कुनै बेला दिनेश जि ले हेर्नु हुन्थ्यो , कुनै बेला हाम्रो शितल जि हुनुहुन्थ्यो त्यस पछि मेरो जिम्मेवारी नै मानव अधिकार र कानुनी क्षेत्र बाट जनयुद्धलाई यहयोग गर्नु नै थियो। सहयोग गरेकै हो।
वरिष्ठ अधिवत्ता एकराज भण्डारी भन्छन् :
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुद्दा हेकसम्म पुग्दैन।
केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा माधव कुमार नेपाल, पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले थुप्रै मानिसहरु बेपत्ता परेर मारेका छन्।
प्रचण्ड बादल देखि विप्लवसम्मको मुद्धा निशुल्क हेरेको छु।
विप्लवसँग सरकारलले विप्लव गर्नुको अरु कुनै विकल्प छैन।